MRB waxay ku taal Shanghai, Shiinaha. Shanghai waxaa loo yaqaan "Oriental Paris", Waa xarunta dhaqaalaha iyo dhaqaalaha ee Shiinaha waxayna leedahay aaggii ugu horreeyay ee ganacsiga xorta ah ee Shiinaha (aagga tijaabada ganacsiga xorta ah).
Ka dib ku dhowaad 20 sano oo hawlgal ah, MRB-da maanta wuxuu ku koray mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee warshadaha tafaariiqda ee Shiinaha oo leh baaxad weyn iyo saameyn, taasoo siineysa xalal caqli badan macaamiisha tafaariiqda, oo ay ku jiraan dadka nidaamka tirinta, nidaamka ESL, nidaamka EAS iyo alaabada kale ee la xiriira
Wax soosaarkayaga waxaa loo dhoofiyaa in kabadan 100 wadan iyo gobolada dal iyo dibadba. Taageerada xoogan ee macaamiisheena, MRB waxay sameysay horumar weyn. Waxaan leenahay nooc suuq geyn u gaar ah, koox xirfadle ah, maamul adag, wax soo saar aad u fiican iyo adeegyo qumman. Isla mar ahaantaana, waxaan diiradda saarnaa tikniyoolajiyadda horumarsan, hal-abuurnimada iyo cilmi-baarista wax soo saarka iyo horumarinta si aan ugu dardarno firfircooni cusub astaanteena. Waxaa naga go'an inaan siinno badeecooyin iyo adeegyo tayo sare leh oo kaladuwan iyo adeegyo loogu talagalay warshadaha tafaariiqda adduunka oo dhan, iyo inaan u sameyno xalka caqliga leh ee macaamiisha tafaariiqda.
MRB waxay ku taal Shanghai, Shiinaha.
MRB waxaa la aasaasay 2003. Sanadkii 2006, waxaan leenahay xuquuq soo dejin iyo soo dejin oo madax bannaan. Tan iyo aasaaskeedii, waxaa naga go'an inaan siinno xalal caqli badan macaamiisha tafaariiqda. Khadadka wax soosaarkayaga waxaa kamid ah Nidaamka tirinta dadka, Nidaamka calaamadda shelf, Elektaroonigga Nidaamka Kormeerka Qalabka iyo nidaamka duubista fiidiyowga, iwm., Waxay bixiyaan xalal dhammaystiran oo faahfaahsan oo wareegsan oo loogu talagalay macaamiisha tafaariiqda adduunka oo idil.
Muxuu sameeyaa MRB?
MRB wuxuu ku takhasusay R&D, wax soo saarka iyo suuqgeynta miisaanka dadka, nidaamka ESL, nidaamka EAS iyo alaabada kale ee la xiriira tafaariiqda. Khadka alaabtu wuxuu daboolayaa in ka badan 100 moodal sida IR bream people counter, 2D camera people counter, 3D people counter, AI Dadka tirinta nidaamka, Tijaabinta Baabuurta, Kaarka rakaabka, Calaamadaha shelf ee elektarooniga ah oo leh cabirro kala duwan, alaabooyin kala duwan oo ka hortag ah dukaanka. iwm
Alaabooyinka ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dukaamada tafaariiqda, silsiladaha dharka, dukaamada waaweyn, carwooyinka iyo munaasabadaha kale. Badeecadaha badankood waxay dhaafeen FCC, UL, CE, ISO iyo shahaadooyin kale, badeecaduna waxay ku guuleysteen amaan loo dhan yahay macaamiisha.
Maxaa loo doortaa MRB?
1. Mashiinka Waxsoosaarka Aqoonta
Inta badan qalabka wax soo saarkeena waxaa toos looga keenaa Yurub iyo Ameerika.
2. Awood wanaagsan R & D
Annagu kaliya ma lihin shaqaale farsamo oo u gaar ah, laakiin sidoo kale waxaan la shaqeynaa jaamacadaha si aan u sameyno cilmi baaris iyo horumarin. Iyada oo loo marayo dadaallada isdaba jooga ah, waxaan ku haynaa badeecadaheena safka hore ee warshadaha.
3. Xakamaynta Tayada adag inta lagu jiro 3 qaybood kahor rarka
Control Xakamaynta tayada Waxyaabaha Aasaasiga ah.
Test Tijaabinta Alaabada Dhamaatay.
Control Xakamaynta tayada ka hor dirista.
4. OEM & ODM waa la heli karaa
Fadlan noo sheeg fikradahaaga iyo shuruudahaaga, waxaan diyaar u nahay inaan kula shaqeyno si aan u qaabeyno alaabadaada gaarka ah.
Saaxiibbadeen oo ka kala yimid dalal kala duwan oo Dunida ka tirsan.
Inaad inbadan naga barato wax badan ayey kaa caawin doontaa.
Isticmaal khibradeena 20-sano ee warshadaha si aan kuugula talinno tayada ugu fiican uguna habboon alaabta adiga.
Ganacsade lagu daray farsamo yaqaan ayaa ku siin doona adeegyo badan oo buuxa inta hawshu socoto.
7 * 24 saac jawaab farsamo.
Taageero farsamo adeegga tababarka farsamada
Taageerada qiimaha qeybiyaha
7 * 24 saacadood taageerada khadka tooska ah
Adeeg damaanad qaad dheer
Adeegga booqashada ku noqoshada joogtada ah
Adeeg cusub oo dhiirrigelin ah
Adeeg casriyeyn bilaash ah